PHP: Akwụkwọ buru ibu na MVC Okpokoro maka PHP | Martech Zone
PHP: Akwụkwọ buru ibu na MVC Framework maka PHP
Satọdee, Nọvemba 10, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndị folks n'elu na Akwụkwọ Packs nwere ederede na nso nso a ebe ha na-agba ndị mmepe / ndị na-ede blọgụ PHP ume ka ha gụọ akwụkwọ ọhụrụ na blog banyere ya. Enwere m ekele maka ohere ndị dị ka nke a - ọ rịaghị maka izipu ozi ọ bụla ma ọ bụ nke na-adịghị mma, naanị nyochaa eziokwu nke akwụkwọ ha nyere (na-akwụghị ụgwọ).
Akwụkwọ m nwetara bụ CodeIgniter maka Ngwa Ngwa ngwa ngwa PHP, nke David Upton dere.
Akwụkwọ m kacha amasị m na PHP / MySQL ka dị PHP na MySQL Web Development. Ọ bụ PHP 101 na MySQL 101 niile ejiri aka dị egwu, akwụkwọ zuru oke na ọtụtụ koodu ntinye. CodeIgniter bu otito zuru oke, ikekwe ntuziaka PHP 201. Ọ na - ewe koodu siri ike nke PHP ma nyefee usoro iji mepụta koodu ngwa ngwa yana omume kacha mma nke MVC usoro.
Dabere na Wikipedia:
Model-ele-njikwa (MVC) bụ ụkpụrụ ụlọ ụkpụrụ eji na software injinịa. N'ime ngwa kọmputa dị mgbagwoju anya nke na-ewepụta data dị ukwuu nye onye ọrụ, onye nrụpụta na-achọkarị ikewapụ data (ụdị) na njirimara onye ọrụ (lee) nchegbu, nke mere na ngbanwe gaa na njirimara onye ọrụ agaghị emetụta njikwa data, yana data ahụ enwere ike ịhazigharị na-enweghị agbanwe agbanwe njirimara onye ọrụ. Onye nlere nlere-ihe nlere anya na-edozi nsogbu a site na ịpịpụ ohere data na mgbagha azụmahịa site na ngosipụta data na mmekọrịta onye ọrụ, site na iwebata mpaghara dị n'etiti: njikwa.
Ewezuga ederede edere nke ọma na ọtụtụ ihe atụ nke ụwa, otu n'ime ihe kachasị amasị m banyere akwụkwọ a bụ na ọ na-akọwa ihe ọ bụghị. CodeIgniter bụ ndu eme iphe-ẹji. Dika odi otua, o nwere ufodu kwetara. Akwụkwọ ahụ na-abanye n'ime ndị a n'ụzọ zuru ezu. Mmachi dị ole na ole achọtara m bụ enweghị akụrụngwa ndị nwere ike ịnweta na ngosipụta nke ihe eji arụ ọrụ dị ka arịlịka, tebụl na ụdị yana ederede ọ bụla gbasara ochie XML REST API na Ọrụ Web. Agbanyeghị, ekwenyere m na nhọrọ ndị ahụ nwere ike ịgbakwunye na nsụgharị n'ọdịnihu - anyị ga-ahụ!
Ngalaba kachasị nke CodeIgniter, n'uche nke m, bụ ọba akwụkwọ nchekwa data. Achọpụtara m ide njikọ MySQL na ajụjụ na-ewe oge ma na-agwụ ike. Achọrọ m igwu ozugbo na CodeIgniter ka ha jiri usoro nchekwa data ha, ekwenyere m na ọ ga-azọpụta m ọtụtụ oge - ọkachasị ederede / idegharị ajụjụ! Enwekwara ụfọdụ mgbakwunye mgbakwunye maka Ajax, JChart na njikwa foto.
Ọ bụrụ na ọ dị ka m na-atụle CodeIgniter karịa akwụkwọ, ha abụọ bụ otu. Akwukwo a bu uzo zuru oke nke imu usoro di omimi, ma obughi iji CodeIgniter. Aga m akwado akwụkwọ a. Akwụkwọ ahụ kwuru “Mee ka nrụpụta ọrụ nzuzo PHP gị ka mma site na iji kọmpụta MVC CodeIgniter na-emepe emepe na-enweghị ihe ọghọm!”. Nke a bụ eziokwu!
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na CodeIgniter, gbaa mbọ lelee vidiyo mmeghe.
Tags: Lee Oddenị kwesịrị ịnọ na twitterọ kwesịrị azụmahịa gị na twittertwitter maka azụmahịagịnị mere ị ga-eji nọrọ na twitter
Nọmba Ndenye Blog 1,000 - Ndụ site na Techpoint!
Bọchị Ndị Ochie nke Obi Happytọ
Jun 20, 2011 na 1: 39 PM
Ebumnuche nke usoro bụ ime ka usoro ịde ederede ngwa ngwa dị mfe.
Ngwa etinyere gburugburu MVC dị mfe ijikwa n'ihi na ọ kewara ya na tiers, nke na-enye ohere maka mmepe onwe onye. Nke a na-akwalite reusability koodu site na ụdị ụlọ, nke a na-eweghachi na ngwa niile.
Jun 20, 2011 na 1: 41 PM